Olee otu ị ga-esi họrọ ebe ntanetị na Amazon ma chọpụta mkpụrụokwu kachasị achọpụta n'ebe ahụ?
Nke mbụ, m nwere ike ịmalite ịmalite ịchọta mkpụrụokwu kachasị achọpụta na Amazon na obere tebụl e kere, dịka ọmụmaatụ, iji akwụkwọ mpịakọta Google. Ihe bụ na ị ga-achọ ịchọta ihe kachasị mkpa maka oge ahụ, dịka ị nwere ike inye onyinye n'akụkụ kachasị elu. Ma ị ga - etinye ma ọ dịkarịa ala nhọrọ abụọ ị ga - eme ọ bụla megide ibe gị - chile en hosting web. N'ụzọ dị otú a, ọ ga-adị mfe karị ịmata ọdịiche dị ike ha na nchọpụta ha, chọpụtakwara n'ụzọ doro anya akụkụ kachasị ike nke niche ọ bụla na-arụ, dịka na-akọwapụta mkpụrụokwu kachasị achọpụta na okwu ọ bụla ọzọ dị oke mkpa maka ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụdị ngwaahịa.
Ya mere, ozugbo i mepụtara ndepụta nchịkọta nhọrọ, ọ bụ oge iji kpokọta njikọ niile nwere ike ịchọta gbasara mkpụrụ okwu niche kasị achọpụta na Amazon. Ọ dịkwa mkpa ikpuchi isi ihe niile na ọnụọgụ weebụ maka ihe ọbụla ị ga-edebe. Nke a bụ ụzọ kachasị mma a ga-esi mejupụta ndepụta nchịkọta gị dị na Akwụkwọ mpịakọta Google - jide n'aka na ị nwere ihe niile dị na ebe a:
1. Niche - kwesịrị ịbụ kọlụm mbụ nke ajụjụ ị ga-amalite. Naanị nyochaa ngbanwe ọ bụla dị njọ iji mee ka kọlụm nke ugbu a jupụta na ngọngọ ndị fọdụrụnụ ị nwere ike ịtụ anya na ị ga-abụ nhọrọ ikpeazụ gị maka nchịkwa ziri ezi na Amazon na isiokwu kachasị achọpụta maka ụdị ahụ.
2. Ọkara Nchọpụta Ọchịchọ - N'ebe a, a na - atụ aro ka ịdee ọnụọgụ ọ bụla nke ọchụchọ ọchụchọ na nkezi. Site na ndabara, a ga-egosiputa ụkpụrụ ndị a dị oke ọnụ site na ngwá ọrụ KWFinder.
3. Mpaghara nke Ọchịchọ Mmasị - kọlụm a ka egosiputa isi ihe nchịkọta ọchụchọ ahụ na ụkpụrụ omume ya niile gbasara mmegharị arụmọrụ (site n'ụdị kachasị dị ala karịa nke kachasị elu nke mgbanwe). Ntughari: ị ga - aka mma ka akụkụ a nke data kewaa site na oge ọbụla n'otu oge.
4. Okwu Mgbagwoju anya - bụ kpọmkwem ebe ebe ị na-ezube itinye otu nyocha ọnụego ụfọdụ na-egosi na ha na-asọmpi na nkeji oge megide ndị ọzọ chọtara oke okwu na niche. Ọ bụrụ na ị na-eji KWFinder, a ga-akwado gị na ọkwa dị iche iche nke asọmpi. M na-ekwu na n'ihi ihe ụfọdụ ha kpọrọ ya SEO Competition Rank.
5. High DA - jiri ngwa KWFinder ma ọ bụ SERPchecker ịkọpụta ọtụtụ saịtị ma ọ bụ ibe weebụ gosipụtara na top 10 nke nsonaazụ ọchụchọ nke Google nwetara ikike njikwa ngalaba ha ga-abịa n'elu 40 pts.
6. PA dị elu, CF, TF - ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkọwa onwe ya ma dị ka kọlụm mbụ, akụkụ atọ ndị na-esonụ ga-egosi na saịtị / ibe dị na saịtị ahụ dị elu (PA), Ogologo Ntughari (CF), yana Ogologo Ụlọnga (TF) nke ọ bụla.
7. Enweghi ike ịmepụta ihe - kọlụm kachasị na nke kachasị dị mkpa iji gosi ọdịiche dị iche na nsonaazụ gị kachasị na nchịkọta kachasị achọpụta na ihe niche Amazon dị elu bụ ndị ị ga-atụle. Maka mgbakọ a (ee, ọ nwere ike ịpụta na ọ bụ onye aghụghọ) M na-atụ aro maka iji AmaProfits ntụpọ com ma ọ bụ ọrụ ọ bụla ọzọ dị ka ntanetị - na ịmeela.